Voalaza ho isan’ny nanatrika izany ny lehiben’ity distrika ity saingy nangina. Nanazava tamin’ny antso an-telefaonina moa ilay voalaza ho Hazomanga voakasik’izany ny sabotsy atoandro teo. “Raha izaho no tonga eto amin’ny Manaraka ,izay manome Fitenenana anao dia alefa miaraka matory aminao any Amin’ny Gendarme .Na ho lazain’olona fitondrana dictature izahay ,tsy ekeko ny raha manao an’izao . Tsy ianao Raiamandreny voafidin’olona koa no hanao an’izany . Ianareo aza manao asan’akoho ,hitariky ny anany hinan-tay.», izay moa no voambara ho fehezantenin’ity solombavambahoaka voambara ho tsy nahatana fihetseham-po ity. Raha tsiahivina dia tonga namory fokonolona tao Bekopaky ireo manampahefana any Antsalova ary niresaka fandriampahalemana sy COVID-19 , hoy ity Hazomanga ity nanazava. Taorian’ilay kabarin’ny depiote dia nanao fanamarihana ity Raiamandreny Hazomanga ity ka nahazo rombo na tehaka avy amin’ireo rehetra nanatrika teo , ka nahatonga ilay depiote nampihinana maloto sy nandrahona ity Olobe ity, raha ny fanazavana hatrany.